Etazonia dia hampihatra ny mandat vaksiny COVID-19 ho an'ny orinasa tsy miankina aorian'ny taom-baovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Etazonia dia hampihatra ny mandat vaksiny COVID-19 ho an'ny orinasa tsy miankina aorian'ny taom-baovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Etazonia dia hampihatra ny mandat vaksiny COVID-19 ho an'ny orinasa tsy miankina aorian'ny taom-baovao.
Zava-dehibe ny mahatakatra fa mbola maro ireo mpiasa tsy voaaro ary mbola tandindonin-doza amin'ny aretina mafy na ho faty amin'ny COVID-19.
Hanomboka hampihatra ny fanaovana vaksiny coronavirus ho an'ny mpiasa tsy miankina i Etazonia manomboka ny 4 janoary.
Ny tsy fanarahana ny fepetra takian'ny vaksiny dia hiteraka sazy mavesatra ho an'ny orinasa, izay handoa onitra eo amin'ny $ 14,000 isaky ny fandikana.
Hiakatra ny onitra miaraka amin’ny fandikan-dalàna maro, hoy ny tompon’andraikitra ambony.
The trano Fotsy dia nanambara androany fa hanomboka hampihatra ny fepetra takian'ny filoha Biden amin'ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mpiasa tsy miankina i Etazonia manomboka ny 4 Janoary 2022.
Ny vaksiny coronavirus tsy maintsy atao ho an'ny orinasa dia hampiharina aorian'ny taom-baovao, hoy ny serivisy mpanao gazety White House. Ireo tsy vita vaksiny dia tsy maintsy atao fitiliana isan-kerinandro.
"Zava-dehibe ny mahatakatra fa mbola be dia be ny mpiasa tsy voaro ary tandindonin-doza amin'ny aretina mafy na ho faty amin'ny COVID-19," hoy ny fanambaran'ny serivisy White House.
Ny tsy fanarahana ny fepetra takian'ny vaksiny COVID-19 dia hiteraka sazy mavesatra ho an'ny orinasa, izay handoa onitra $14,000 eo ho eo isaky ny mandika.
Hiakatra amin'ny fandikan-dalàna maro ny sazy, zokiolona trano Fotsy hoy ny tompon’andraikitra. Tsy fantatra mazava na mety ho voaroaka ny mpiasa raha mandà ny fanaovana vaksiny na fitiliana.
Nahemotra iray volana ny fepetra takian'ny mpiantoka federaly hanaovana vaksiny ary hampiharina manomboka amin'io daty io ihany.
"Amin'ny 4 janoary 2022, ny tobim-pahasalamana [fitsaboana] dia tsy maintsy miantoka fa ny mpiasa rehetra dia nahazo ny tifitra ilaina mba hanaovana vaksiny feno - na dosie Pfizer roa, dosie roa amin'ny Moderna, na dosie iray an'ny Johnson & Johnson," hoy izy. trano Fotsy hoy ny tompon’andraikitra ambony.